Cobalt Air dia manampy ny fidirana any Abu Dhabi avy any Larnaca
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Cobalt Air dia manampy ny fidirana any Abu Dhabi avy any Larnaca
Mafana amin'ny fanambaran'ny lalana tamin'ity herinandro ity tany Düsseldorf, i Cobalt Air dia sahy manambara serivisy vaovao intelo isan-kerinandro mampifandray an'i Abu Dhabi amin'i Larnaca, manomboka ny 25 feb. Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe any Sipra dia hanolotra kilasy fandraharahana sonia vaovao amin'ilay zotra.
“Faly izahay manampy an'i Abu Dhabi ao amin'ny tambajotranay izay lalana lehibe stratejika ho an'ny fizahan-tany sy ny fandraharahana any Sipra. Ity sehatra ity dia tsy hanolotra sidina mivantana mankany Sipra fotsiny, fa koa fifandraisana akaiky mankany London Heathrow. Ny serivisinay an-tsambo dia mahazo fankatoavana avy hatrany amin'ireo vakansy fialam-boly sy orinasanay, ary antenainay fa ny mpandeha manidina mankany Abu Dhabi dia mankafy ny fandraisana an-dry zareo Sipra malaza. Ny Cobalt Air dia nanjary zotram-pifidianan'ny safidy ho an'ny mponina eo an-toerana. ”
Ny làlana Abu Dhabi dia hanasongadinana ny vokatra kilasy fandraharahana vaovao an'ny Cobalt Air, izay ahitana seza fandraharahana lehibe voatahiry ao anaty fanaingoana roa-roa-roa miaraka amin'ny kianja 40 ”. Ho fanampin'izany, ireo mpandeha raharaham-barotra dia hampiasa ny serivisy Dine-on-Demand.
Ny fandaharam-potoanan'ny sidina mankany Abu Dhabi dia natao hanintonana ny mpandeha amin'ny raharaham-barotra na amin'ny fialan-tsasatra. Miala an'i Larnaca amin'ny 22:30 ny sidina ary tonga ao Abu Dhabi amin'ny 04:10. Rehefa mody mody any Sipra, sidina dia hiala ao UAE amin'ny 05:10 ary hiverina any Sipra 07:30. Ny isam-potoana rehetra dia eo an-toerana. Cobalt Air dia hampiasa fiaramanidina A320 misy seza 12 amin'ny kilasy fandraharahana ary seza 144 amin'ny kilasy toekarena hampiasana ny zotra vaovao.
Ny Delta Air Lines dia mandoa ny mpiasa mihoatra ny $ 1 miliara amin'ny fizarana tombony
Handeha ho any Afrika Atsimo? Aza misotro ny rano